violations of election laws NDF candidates claim USDP won unfairly by abusing the advance voting process in Rangoon's Thanlyin Township (ကြံ့ဖွံ့ပါတီသည် သန်လျင်တွင်ကြိုတင်မဲပေးမှုများအပါ် အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ကာ မတရားသောနည်းဖြင့် အနိုင်ရရှိသွားခဲကြောင်း NDF ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဆို)
Three candidates from the National Democratic Force (NDF) who stood for election in Rangoon's Thanlyin Township—Dr Aung Naing for the People's Parliament (Lower House), Khin Maung Lwin Oo for the Nationalities Parliament (Upper House) and Aung Naing Htun for the Rangoon Division Parliament—refused to sign an Election Commission document stating that they agreed the vote-counting process was fair and acknowledging that they have lost the election in Thanlyin Township.
USDP candidate buys votes and breaks election laws in Namkham, Shan State (ရှမ်းပြည်နယ်၊ နမ့်ခမ်းမြို့တွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေချိုးဖောက်ကာ မဲဝယ်)
A candidate of the junta-backed Union Solidarity and Development Party (USDP) in Namkham, Kyaw Myint aka Li Yongqiang (51),awell-known Panhsay militia chief and druglord from Namkham argued with members of Shan Nationalities Democratic Party (SNDP) over USDP’s vote buying and vote cheating in polling stations, local sources reported.
Junta's USDP steals votes and uses intimidation in Kachin State (ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကြံ့ဖွံ့မဲမသာမှုများနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများပြုလုပ်) Posted in abuse of government authority
The ruling military junta in Burma blatantly grabbed votes for its own party, the Union Solidarity and Development Party (USDP), by abusing its authority through acts of voter fraud during yesterday’s election, eyewitnesses said.
“The Chief of quarter administration stood in front of the polling station and told all voters ‘you all should vote for the USDP’s Zahkung Ting Ying. We see and know who you are voting for, so be careful’. So, all the people voted for Ting Ying,” saidalocal source in Pangwa, the headquarters of the former armed group, the New Democratic Army-Kachin (NDA-K).
An elderly person pressured to vote for USDP but voted for Mon party (အဘတစ်ဦး ကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုမဲပေးရန် ဖိအားပေးခံခဲ့ရသော်လည်း မွန်ပါတီကိုသာ မဲပေးခဲ့)
Speaking to Burma Election Tracker, an elderly person said: "Before Nov 7, 2010, people were pressured and told repeatedly by chairperson of TPDC to vote for the USDP, but I voted for my ethnic party. No matter if they wins or not, I have committed myself to support the Mon party." “နိုဝင်ဘာလ(၇) ရက်မရောက်မှီ ခြင်္သေ့ပါတီကို မဲပေးစေရမည် မ.ယ.က ဥကဌကအကြိမ်ကြိမ် ဖိအားပေးခဲ့သော်လည်းပဲ အဘကတော့ ကိုယ့်လူမျိုးပါတီကိုပဲ မဲပေးခဲ့သည်။ ရှုံးသည်ဖြစ်စေ၊ နိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မွန်ပါတီကိုပဲ အားပေးသွားမယ်” ဟုမဲပေးခဲ့သူအဘတဦးက Burma Election Tracker သို့ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
Polling officers biased, urge people to vote for USDP in Magwe, Rangoon, and Mandalay townships (မကွေး၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့တွင် ကြံ့ဖွံ့ကိုမဲပေးရန် မဲရုံတာဝန်ခံများ တိုက်တွန်းပြောဆို) Posted in abuse of government authority
Polling Station Officers' Bias: Polling officers urged voters to vote for the junta-backed Union Solidarity and Development Party (USDP) in Thingangyun, Thaketa and Kayan of Rangoon Division, in Thabeikkyin in Mandalay Division and in Kamma in Magwe Division. http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=19984
ရန်ကုန်တိုင်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ သာကေတနှင့် ခရမ်းမြို့နယ်များ၊ မန္တလေးတိုင်း၊ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်နှင့်၊ မကွေးတိုင်း၊ ကံမမြို့နယ်တို့တွင် စစ်အစိုးရကျောထောက်နောက်ခံ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မဲပေးရန် မဲရုံတာဝန်ခံများက တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
Polling officers biased, urge people to vote for USDP in Thabeikkyin in Mandalay Division
Polling Station Officers' Bias: Polling officers urged voters to vote for the junta-backed Union Solidarity and Development Party (USDP) in Thabeikkyin in Mandalay Division.
Polling officers biased, urge people to vote for USDP in Rangoon
Polling Station Officers' Bias: Polling officers urged voters to vote for the junta-backed Union Solidarity and Development Party (USDP) in Thingangyun, Thaketa and Kayan of Rangoon Division.
Voting rooms not secured while voting minipulated by USDP in Mon State (မွန်ပြည်နယ်တွင် မဲရုံများလုံခြုံမှုမရှိ၊ မဲပေးမှုများကို ကြံ့ဖွံ့ ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်)
The USDP cast their own votes, collected votes from citizens, and "corrected" ballots while the Ward Sub-Commission collected advanced votes townships in Mon State. The voting rooms were described as "not secured."
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ သူတို့မဲတွေ သူတို့ပေးခဲ့တယ်။ ပြည်သူများဆီမှလည်း မဲကောက်ယူခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ မွန်ပြည်နယ်မှာ ရက်ကွက်ကော်မရှင်ခွဲတွေက ကြိုတင်မဲ လိုက်ကောက်နေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ကမဲတွေကို လိုက်ပြင်တယ်။ မဲပးတဲ့အခန်းတွေကို “လုံခြုံမှုမရှိဘူး” လို့ပြောနေကြတယ်။
Source: International Mon News Agency